ဘဝမှတ်တိုင်: ဖုန်းတွေကိုမြန်မာဖောင်ထည့်နည်း ၂။။
(၁) ဒါကိုဒေါင်းလုပ်လုပ်ပါ GT-19070-root. rar ပြီးရင် rar ဖိုင်ကိုဖြည်ထားလိုက်ပါ
(၂) ပြီးရင် ကွန်ပျူတာပေါ်မှာ Odin3 v1.83. exe ဆိုတဲ့ ပရိုဂရမ်ကိုrunပါ
(၃) ပြီးရင် ဖုန်းဆက်တင်ကိုဖွင့်ပါ Setting > Aplications -> Development and check USB Debugging and Allow mock location ကိုရွေးပေးပါ (နှစ်ခုစလုံးရွေးပေးရန်လိုအပ်ပါ
(၄) ဖုန်းကိုပိတ်လိုက်ပါ ပြီးရင် ဒေါင်းလုပ် မု ထဲကိုပြန်ဝင်ပါ လုပ်နည်းအဆင့်ဆင့်က ဒီမှာပါ Volume Down + Home button + Power button တို့ကို ပုံမှန်နဲ့မတူတဲ့ စခရင် ပေါ်လာတဲ့အထိဖိထားပါ ပြီးရင် usb ကြိုးတပ်ပြီး continue ကိုရွေးပေးပါ
(၅) Odin ကဖုန်းကိုသိအောင်ခနစောင့်ပါ (ပြသနာရှိရင် sumaung drivers တွေကို အင်တာနက်က ရှာယူပါ)
(၆) PIT ဆိုတဲ့နေရာမှာ ခုနကဖြည်ထားတဲ့ဖိုတာထဲက GT-I9070_EUR_XX_8G_20111220_KL6.pit ဆိုတဲ့ဖိုင်ရွေးပေးပါ
(၇) PDA ဆိုတဲ့နေရာမှာ rootkernel.tar.md5 ကိုရွေးပေးပါ
(၈) options မှာ(remove selction) Re-Partition, Flash Lock, Phone EFS Clear, Phone Bootloader Update! တွေကိုချက်မလုပ်မိစေဖို့သတိထားပါ ၊ Auto Reboot and F.Reset Time တွေကိုသာချက်လုပ်ပေးပါ
(၉) အဲဒါတွေလုပ်ပြီးရင်တော့ start ကိုနှိပ်ပါ ဖုန်းရီဘို့ပြန်တက်လာတဲ့အထိခနစောင့်ပါ
(၁၀) ပြီးရင် အဆင့် ၄ ကနေ ၉ အထိကိုပြန်လုပ်ပါ့မယ် ၊ အဆင့် ၇ မှာတော့ xxld1.tar.md5 ဒီဟာလေးကိုရွေးပေးလိုက်ပါ
(၁၁) ပြီးရင်တော့ superuser ဒါမှမဟုတ် supersu တစ်ခုခုကို ဒေါင်းပြိး အင်စထောလုပ်ပါ ၊နောက် super one click
ဖြင့် root လုပ်ဖို့ ဒီမှာယူပါ အခုဆိုရင် root လုပ်ပြီးသားဖုန်းကိုပိုင်ဆိုင်ပါပြီ...။
Credit to : Myanmar Play
စာရေးသူ kyawsan အချိန် 9/14/2012 09:53:00 pm